धर्म संस्कृति – Ramailo Sandesh
मुस्ताङको मुक्तिनाथ (३८०० मिटर) मन्दिर पवित्र थलो हो । हिन्दु र बौद्धमार्गि दुबैको साझा तिर्थ । बर्सेनी लाखौंको भिड लाग्छ । मन्दिर दर्शन गरेर त्यहाँको १०८ धारामा नुहाएमा पाप पखालिने…
यी ३ राशी हुने बुहारी, जसले बनाउछन् जस्तोसुकै घरलाई पनि स्वर्ग समान
काठमाडौँ । फरक फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ। विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ। ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका…
राती सपनामा हजुरले मन्दिर गएको देख्नु भएमा यसको के अर्थ होला थाहा छ हजुरलाई ?
काठमाडौँ – वास्तवमा भन्नुपर्दा, ‘सपना’ भनेको हाम्रो अवचेतन मनमा भएका कुराहरूलाई हामीसामुन्ने देखाउने श्रोत हो भन्न सकिन्छ। हरेक संस्कृतिले ‘सपना’लाई भिन्नाभिन्नै दृश्टिकोणले हेर्ने गर्दछ भने हरेकले आफ्नै तरिकाले सपनालाई व्याख्या…
उपहारको रुपमा लिन र दिन हुँदैन यी वस्तु कंगाल भइन्छ ,संकट आउँछ
कुनै पनि बिवाह ब्रतबन्ध या जन्मदिनको उत्सव होस् या भेटघाटको खुसियाली हामी उपहार लिने र दिने गर्छौ जो कोही पनी उपहार पाएमा खुशी हुन्छौ । तर, के कहिल्यै सोच्नु भएको…
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन्। कुनै-कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने…
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? थाहा पाउनुस
प्रमुख पात्र भ्यागुतो भएका लोककथा र बालकथाहरू अनगिन्ती छन्। तर ‘वैज्ञानिक प्रयोगमै आधारित’ भनिएको र व्यापकरूपमा सुन्ने–सुनाइने गरेको एउटा कथा भने अत्यन्त त्रासदमात्रै होइन हामी सबैलाई तर्साउने र बिउँझाउने चरित्रको…
काठमाडौँ । कयौँपल्ट बाटोमा हिँड्दा हामीहरुले बाटोमा रुपैँया वा सिक्का भेट्टाउने गछौँ । कसैले भेटिएको पैसा आफैँसँग राख्छन् त कसैले दान गर्छन्। ज्योतिषशास्त्रले भने बाटोमा भेटिएको पैसाको कारण र संकेत…
लसुन विश्वको धेरैजसो भान्सामा प्रयोग हुने मसला हो । खानालाई स्वादिष्ट बनाउँन बाहेक लसुनलाई केही घरेलू उपचारमा पनि प्रयोग गरिँदै आएको छ । लसुनको केही परम्परागत महत्व छन्, जसले नकारात्मक…
जानि राख्नुहाेस् , कस्तो ओठ हुनेको कस्तो स्वभाव ?
काठमाडौं । मानिसलाई सुन्दर देखाउने महत्वपूर्ण अंग मध्ये ओठ पनि एक हो । ओठका बारेमा मानिसहरुले विभिन्न तरिकाबाट व्याख्या गरेपनि ओठ हेरेरै मानिसको स्वभाव पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा तपाईलाई अनौठो…
सपना के हो ? यसबारे अनेक किसिमको मत छ । हाम्रो समाजमा सपनालाई कतिपय संकेतको रुपमा पनि बुझिने गरिएको छ । सपनालाई राम्रो र नराम्रो भनेर पनि छुट्याउने गरिन्छ ।…